Fanatsarana ny fahombiazan'ny Magento sy ny valin'ny orinasanao | Martech Zone
Magento dia ekena ho toy ny sehatra e-varotra ambony, manome fahefana hatramin'ny iray ampahatelon'ny tranokala fivarotana an-tserasera rehetra. Ny ivon-toeran'ny mpampiasa sy ny mpamorona tambajotra goavambe dia mamorona ekosistia, raha tsy misy fahaizana teknika be dia be, saika ny olona rehetra dia afaka mahazo tranokala e-varotra mihazakazaka haingana.
Na izany aza, misy ny lafy ratsy: mety ho mavesatra sy miadana ny Magento raha tsy voatsara tsara. Ity dia mety ho turn-off tena izy ho an'ny mpanjifa haingam-pandeha ankehitriny izay manantena ny fotoana hamaly haingana avy amin'ireo tranonkala vangiany. Raha ny marina, araka ny a fanadihadiana natao vao tsy ela avy tany Clustrix, 50 isan-jaton'ny olona no miantsena any an-toeran-kafa raha toa ka misy pejy mampiditra pejy miadana tsikelikely.
Ny fitomboan'ny fangatahana hafainganam-pandehan'ny tranonkala dia nanosika ny fanatsarana ny zava-bitan'ny Magento ho eo an-tampon'ny lisitra ho an'ny ankamaroan'ny mpamorona matihanina. Andeha hojerentsika ny fomba telo hanatsaran'ny orinasa ny fahombiazan'ny sehatra Magento.
Ahenao ny fangatahana
Manatanteraka tambajotra fandefasana atiny (CDN)
Tambajotra fanaterana atiny avelao ianao hampidina ny sarin'ny tranokalanao sy ny atiny hafa miorim-paka amin'ireo ivon-data izay akaiky ny mpanjifanao. Ny fampihenana ny halaviran'ny dia dia midika hoe ho tonga haingana kokoa ny atiny. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny alàlan'ny famoahana ny atiny ao amin'ny tranonkalan'ny tranonkalanao, dia manana loharanom-pahalalana maimaim-poana hahafahanao misimisy kokoa ny mpampiasa miaraka aminy, miaraka amin'ny fotoana famaliana pejy tsara kokoa aza. Ny mpizara lozisialy dia miasa tsara sy mahomby indrindra rehefa afaka mifantoka amin'ny famoronana, fanavaozana, fanamafisana ary famitana ny fifanakalozana. Ny fampiantranoana ny famakiana fotsiny ihany ao amin'ny datao dia mamorona enta-mavesatra tsy ilaina sy tsy ilaina tsy azo ihodivirana ho an'ireo tranonkala e-varotra be fivezivezena.
Ampifanaraho tsara ny mpizara lozisialy
Magento dia manao fangatahana mitovy amin'ny mpizara data isaky ny jerena ny pejy iray, na dia tsy dia misy fiovana loatra aza amin'ireto fangatahana ireto rehefa mandeha ny fotoana. Ny data dia tsy maintsy alaina ao amin'ny kapila na media fitahirizana, alahatra sy hamboarina, ary averina any amin'ny client avy eo. Ny valiny: milentika amin'ny fampisehoana. MySQL dia manolotra mari-pandrefesana namboarina antsoina hoe query_cache_size izay milaza amin'ny mpizara MySQL hitahiry ny valin'ny fangatahana ao anaty fitadidiana, izay haingana kokoa noho ny fidirana amin'ny kapila.
Ny fampihenana ny fangatahana, ny fampiharana CDN ary ny fametrahana ny lozisialy MySQL dia tokony hanatsara ny fahombiazan'ny Magento; na eo aza izany dia mbola betsaka ny orinasa afaka manatsara ny fahombiazan'ny tranonkala amin'ny ankapobeny. Mba hanaovana izany, ny mpandrindra ny tranokala e-varotra dia mila mandinika indray an'io database MySQL io. Ity misy ohatra iray rehefa mikapoka ny rindrina ny scaling MySQL:
(Re) Tombano ny data-nao
Toerana e-varotra vaovao maro no mampiasa tahiry MySQL voalohany. Database voaporofo efa voaporofo amin'ny fotoana kely ho an'ny tranokala kely. Eo no mipetraka ny olana. Ny database MySQL dia misy fetrany. Betsaka ny data MySQL tsy afaka maharaka ny fitaky ny habaka e-varotra mitombo haingana, na eo aza ny fahombiazan'ny Magento. Raha toa ny tranokala mampiasa MySQL dia mety miovaova mora foana hatramin'ny zero hatramin'ny 200,000 mpampiasa, mety ho sempotra izy ireo raha toa ka miakatra hatrany amin'ny 200,000 ka hatramin'ny 300,000 ireo mpampiasa satria tsy afaka mizatra miampy enta-mavesatra be loatra izy ireo. Ary fantatsika rehetra, raha tsy afaka manohana ny varotra ny tranonkala iray noho ny tahiry tsy misy fotony, dia hijaly ny faran'ny orinasa.
Diniho ny vahaolana vaovao - Soa ihany fa misy ny vahaolana: ny tahiry NewSQL dia mitahiry ireo foto-kevitra ifandraisan'ny SQL fa ampio ny singa fampisehoana, fahaiza-miaina ary fahitana izay tsy hita ao amin'ny MySQL. Ny data NewSQL dia mamela ny orinasa hahatratra ny zava-bitan'izy ireo amin'ny fampiharana lehibe, toa an'i Magento, raha mampiasa vahaolana izay sariaka amin'ireo mpamorona efa tafiditra tsara ao amin'ny SQL.
Mampiasà fomba fanao mizana - NewSQL dia tobim-pifandraisana mifampirehareha amin'ny fizotran'ny scaling marindrano, ny fahazoana antoka ny fifanakalozana ACID ary ny fahaizana mandrindra volavolan-trosa marobe miaraka amin'ny fahombiazana tsara indrindra. Ny fampiasa toy izany dia miantoka fa tsy misy olana ny traikefan'ny mpanjifa miantsena amin'ny alàlan'ny fampihenana na fanesorana ireo fahatarana nomerika mety hizaka azy ireo. Mandritra izany fotoana izany, ireo mpanapa-kevitra dia afaka mamakafaka ireo angon-drakitra mba hahitana fomba iray hikendrena manokana ireo mpiantsena amin'ny alàlan'ny fivarotana amidy sy fivarotana ambony.
Ireo tranonkala e-varotra tsy voaomana dia tsy hiasa tsara raha tsy ampy fitaovana hikirakirana entana mavesatra, indrindra mandritra ny fotoana fitomboan'ny fivezivezena. Amin'ny alàlan'ny fampiasana data database SQL misy fandeferana, dia azonao atao ny miantoka fa ny tranokalan'ny e-varotra dia afaka mitantana ny habetsaky ny fifamoivoizana saika amin'ny toe-javatra rehetra, ary koa manome ny mpanjifa traikefa amin'ny fivarotana tsy misy tohika.
Manatsara ny zava-bitan'ny Magento ihany koa ny fampiasana tahiry SQL mivelatra. Ny tombony lehibe azo avy amin'ny angon-drakitra SQL mivelatra dia ny ahafahany mitombo ara-dalàna ny famakiana, ny fanoratana, ny fanavaozana ary ny fandalinana satria ampiana teboka angona sy fitaovana maro. Rehefa mihaona amin'ny rahona ny maritrano marobe, ny rindrambaiko vaovao dia afaka mandray mora foana ny fanampian'ny mpanjifa vaovao sy mampitombo ny habetsahan'ny fifanakalozana.
Ary ny tena tsara indrindra, ny angon-drakitra NewSQL dia afaka mizara mangarahara amin'ny fangatahana amin'ireo mpizara tahiry maro, ary mandanjalanja ny asa ataon'ny tranokalanao. Ity misy ohatra iray amin'ny data NewSQL, ClustrixDB. Izy io dia mihazakazaka node enina mpizara, mizara ny fanoratana sy ny fangatahana famakiana manerana ireo enina enina, sady mitazona akaiky ny fizotran'ny loharanon-karena sy ny fotoana fanatanterahana ny fangatahana:
Hamarino fa misy zavatra mety ho an'ny mpanjifa
Raha tompona orinasa ianao dia tsy maintsy manao izay rehetra azonao atao mba hahazoana antoka ny traikefa amin'ny e-varotra mety ho an'ny mpanjifanao, na manao ahoana na manao ahoana ny fifamoivoizana ataon'ny tranokalanao amin'ny fotoana rehetra. Rehefa dinihina tokoa, raha ny safidin'ny fiantsenana an-tserasera no jerena, dia manana safidy tsy misy farany ny mpanjifa ankehitriny - fanandramana ratsy iray mety hanosika azy ireo hiala.
Momba an'i Clustrix
Tags: klopymagentofampisehoana magentoMySQLnewsqlfampisehoana
Ny antony sy ny vokatr'izany olana izany